I-Raw Tianeptine Sodium Salt Powder (30123-17-2) Abakhiqizi - i-Phcoker
I-Tianeptine usawoti powder usawoti uyinhlanganisela ye-tricyclic, ingumgqugquzeli okhethwayo we-5-HT (serotonin; sc-201146) ithatha in vitro….
Usawoti we-Tianeptine sodium unamakhono we-nootropic maqondana nabantu abanokuqonda okungathinteki kabi ukuphazamiseka kwemizwelo futhi banamandla okuthuthukisa ukugxila nokugxila kubantu abangakwazi ukunaka kahle.
Usawoti we-Tianeptine sodium unezimpawu zokulwa nokukhathazeka kanye ne-antidepressant kanye ne-nootropic.
I-Tianeptine usawoti powder usawoti uhlangana nezingxenye eziningi zobuchopho kufaka phakathi ama-opiod receptors, angadala umphumela ohlangothini lwesasasa. Eminye imiphumela engemihle enemvamisa ehlukahlukene ifaka okulandelayo:
Eminye imiphumela emibi ibandakanya izinto ezifana nokuqunjelwa, isicanucanu, ukukhathazeka noma Isibindi Sobuthi. Izinkathazo ezinzima kakhulu zibandakanya ukuhoxa ngemuva kokuhlukunyezwa kanti abasebenzisi abalinganiselwa ku-0.1 - 0.3% bazoba nale nkinga. Kuze kube nini, njengoba ubona, imiphumela emibi kasawoti we-Tianeptine sodium izoncika kumuntu ngamunye kanye ne-biochemistry yomuntu siqu.